UMike Tyson noJames Tillis | Umlo wokuqala wokuQala ukuthatha iTyson umgama
UMike Tyson vs James Tillis 3/5/86
IZiko loLuntu, iGlens Falls, eNew York, e-USA
UMike Tyson owayengafakwanga (19-0, 19 KOs) wangena kwi-215 lbs, uJames Tillis (31-8, 24 KOs) 208 lbs. Ngelo xesha, uTyson wayephumelele konke ukunkqonkqoza ngokunkqonkqoza kwaye uTillis wayelinyathelo elinyukayo eklasini kwindlela yakhe yentshatsheli enzima.
Umlo wawucwangciselwe ukuqala nge-29 ka-Matshi kodwa walibaziseka njengoko uTyson wayenosulelo lwendlebe.
Ukuza kulo mdlalo, uTillis (owaziwa ngokuba ngu "boyboy olwayo") wayengu-1-4 kwizihlandlo ezi-5 zangaphambili kodwa wangena ekhuthazekile kule mpi, enobunzima bakhe obulula kwiminyaka emibini.
Isalathiso sikaJoe Cortez, umlo wawucwangciselwe imijikelo eli-10 kwaye amanqaku amajaji amathathu. UAl Reid ufumene amanqaku angama-6-4 ukuya eTyson, uBernie Friedkin 6-4 ukuya eTyson kunye noTony Moret 8-2 ukuya eTyson. I-bout ke ngoko yayisisigqibo esivumelanayo sokuphumelela kwamanqaku eTyson.
Amanqaku athatyathwa njengengxabano, uninzi lwabantu abangama-7,591 ababekho besithi uTillis uphumelele, kwaye ngokuchaseneyo noTyson.
Khange baphinde badibane njengabalwi abanobuchule nangona badibana kumdlalo womboniso ngomhla we-13 kuNovemba, 1987. Imali leyo yaya kwiCawe yeengelosi ezingcwele kwaye yabanjelwa kwiholo i-De Pauls Alumni kwaye bobabini babenxibe izixhobo zentloko kunye neeglavu eziyi-16.
Umnyhadala uboniswe yi-HBA kunye ne-Tri-City Promotions.